'माओवादीले दिएको दुःखका कारण बिदेशीनु पर्यो' - Naya Online
‘माओवादीले दिएको दुःखका कारण बिदेशीनु पर्यो’
बिहिबार, माघ २१, २०७२ (February 4th, 2016 at 4:19pm ) अन्तर्वार्ता, प्रवास
सल्यान कालीमाटी, हालः वेष्ट पोर्ट, पोर्ट क्लाङ सेलाङ्गर
१८ महिना अगाडी मलेसिया आईपुग्नु भएका सल्यान कालीमाटीका टोपनारायण भण्डारीका टिठ्लाग्दा मलेसिया भोगाईका बारेमा गरेको कुराकानीको संक्षिप्त रूप ।
नेपालमा के गर्नु हुन्थ्यो ?
म नेपाल अध्ययन नै गर्थे । विद्यार्थी सँगै सुर्खेतमा गएर फुपुको मादिरा डिलरमा काम गर्थे । फुपुको आफ्नै डिलर भएकोले मलाई खान बस्नसहित १० हजार रूपैया दिने गर्नुहुन्थो । तर काम चाहि फुपुकोमै भएपनि दैनीक १६ घण्टासम्म गर्नु पथ्र्यो । काम अलिक ‘हार्ड’ नै थियो । देशी तथा बिदेशी बिभीन्न रक्सीहरू लोड तथा अनलोड गरिरहनु पथ्र्यो । काम हार्ड पनि भयो र दैनकि लामो समयसम्म गर्नु परेकोले पनि होला मेरो शरीरमा समस्या हुन थाल्यो र बिरामी भएर सुत्नु पर्यो । बिरामी भएपछि म फेरि काममा फर्कन सकिनँ । म सुर्खेतबाट गाउँ फर्किए र उपचार गरेर बसे ।
विदेशीन केले बाध्य गरायो ?
वास्तबमा म माओबादी पाटीका कारण बिदेशीनु पर्योे । म गाउँमा नभएको बेला माओवादीले हाम्रो घरमा आएर मेरो बुवा तथा परिवारलाई दबाब दिने गर्दो रहेछ । हामी साधारण गरिखाने किसानलाई पटक पटक प्रेसर दिन थालेपछि बुबाले त्यसको प्रतीकार गर्नु भएछ । बुवाले प्रतिकार गर्दा जंगलमा लगेर हातखुट्टा बाँधेर मरणासन्न हुने गरी पिटेछन् । बुवालाई पछि फेरि भाईलाई समेत त्यसरी नै पिटेर त्यसस्तो अबस्था सुनेपछि म गाँउ फर्के । फुपुकोमा अलिअली कमाएको पैसाले समेत बुवा र दाजुको उपचार गराउन पुगेन । ऋण गरेर उपचार गराउनु पर्यो । बुवा र भाईको उपचारका लागि लिएको ऋण तिर्न नै बास्तवमा म बिदेशिनु पर्यो ।
बैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया नै किन रोज्नु भयो ?
मलेसियाबाट फर्केर गएका साथीहरूले मलेसियाका बारेमा बताएका थिए । नेपालको जस्तै हावा पानी, नेपालको जस्तै खानाको परिकार तथा हिडडुल गर्नमा स्वतन्त्रता छ भन्ने गरेको सुनेर मैले बैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया रोजेको हु ।
नेपालको कुन मेनपावरलाई कति तिरेर आउनु भएको ?
काठमाडौको सामाखुसीमा अबस्थित मास मेनपावरलाई १ लाख ५५ हजार तिरेर आएको हु ।
नेपालमा मेनपावरले तपाईले यहाँ गर्ने काम र तलबको बारेमा के के भनेको थियो ?
नेपालको मेनपासरले मलाई फुड कम्पनी भनेर पठाएको थियो । तर यहाँ आएर जुस कम्पनीमा पर्यो । नेपालमा ओभरटाईम समेत गरेर मासिक एक हजार ६ सयसम्म कमाई गर्न सकिन्छ भनेको थियो । तर यहाँ दैनिक १४ घण्टा काम गर्दा पनि बल्ल तल्ल १ हजार २ सय आउँछ । नेपालमा भनेको जस्तो छैन नै भन्नु पर्यो ।
तपाईलाई सबैभन्दा पहिला मलेसियाको एयरपोर्टमा झर्दा कस्तो अनुभव भयो ?
सुरुमा मलेसियाको एरपोर्टमा झर्दामा म कहाँ हो कहाँ आए जस्तो लाग्यो । सफा भुई मगमगाएको बासना लगायतले मेरो मनमा नेपालमा यस्तो भईदिए कत्ति राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने महसुस भयो । मनमा अब कता जाने के गर्ने होला, कसरी कम्पनी पुग्ने हो भन्ने कुराले सताउन थालेको थियो ।
एयरपोर्टभित्र पसिसकेपछि तपाईले केके देख्नु भयो ?
एयरपोर्टभित्र पसेपछि हामी प्रतिक्षालयतिर जानु पर्ने रहेछ । हामी पनि त्यतै गयौ । त्यहा पुग्दा त हामी जस्ता नेपाली सयौको हाराहारीमा रहेछन् । कोहि हप्ता दिन देखी त्यहि बसेको, कोहि १५ दिनदेखी त्यही बसेको जस्ता कुरा सुन्न थालीयो । पिसाब गर्न जान पनि प्रहरीलाई पैसा दिनु पर्यो । बिना पासपोर्ट पिसाब गर्नु पनि प्रहरीले नदि“दो रहेछ । अन्य साथीहरूको बिजोग देख्दा मलाई पनि यसैगरि समयमा लिन नआएर यहि अलपत्र परेर पो बस्नु पर्ने हो कि भन्ने डर मनमा पस्न थाल्यो । तर मलाई चाहि करिव ४ घण्टामा नै लिन आयो । र, मेरो डराईरहेको मन केहि भए पनि हल्का भयो ।
एयरपोर्टबाट फर्कदा बाटोमा देखिने विविध दृश्यले मनमा कस्ता कुरा खेलेका थिए ?
एयरपोर्टबाट मैले काम गर्ने ठाउँ पुग्न करिब १ घण्टा लाग्दो रहेछ । सायद एयरपोर्टमा मलाई लिन आउने व्यक्ति कम्पनीकै प्रतिनिधी भएको हुनुपर्छ । एयरपोर्टबाट बहिर निस्कने बित्तिकै मलेसियाका चिल्ला कालोपत्रे गरिएको फराकिला बाटाहरू, गगन चुम्ने महल बाटोका किनारमा हरिया रुखबिरुवा, हेर्दै पनि आ हा ! देख्दा मनमनै वा बिदेश भनेको त यस्तो पो हुदो रहेछ त भन्ने लाग्यो । अनि मनमनै सोच्न थाले मेरो नेपाल कहिले यस्तो होला ?
बाहिरको रमाईला दृष्य देखेपछि आफु काम गर्ने कम्पनी पुग्दा कस्तो महसुस भएको थियो ?
बाहिरका रामाईला दृष्यहरू हेर्दै विदेशका बारेमा मनमा राम्रा राम्रा, रमाईला कुरा खेलीरहेको मेरो मन होष्टल पुगेपछि बिरक्तीयो । एउटा ठुलो सभाहल जत्रो कोठामा बस्नु पर्ने, कोठा पनि उस्तै फोहोर, एउटै कोठामा १८ जना बस्नु पर्ने देख्दा त मेरो मन नरमाईलो लाग्यो ।
तपाईलाई कम्पनीमा पहिलो दिन के के गराईयो ?
होष्टल आएको भोलीपल्ट मलाई काममा लग्यो । मलाई त नेपालमा फुड्स कम्पनी भनेर पठाएको तर यहाँ आएर जुस कम्पनी भएको थाहा पाएँ । सुरुमै मलाई मेनपावरले झुट बोलेको थाहपाएर रिस उठ्यो । मलाई सुरुको दिन मै ५० किलोको बोरा उठाउन लगायो । साथै अन्य कामको बारेमा केहि जानकारी लिईयो ।
काम गर्दै गएपछि कम्पनीको काम र कमाईमा कत्तिको संतुष्ट बढ्न थाल्यो ?
नेपालमा मेनपावरले भनेअनुसारको काम नभएकोले सुरुमै रुष्ट भएको म काममा सन्तुष्ट हुने कुरै भएन । कमाई पनि नेपालमा मेनपावरले भने भन्दा कम नै छ । काम धेरै नै गाह्रो छ । त्यसैले काम र कमाई शन्तोष जनक नभएर म बिचमै स्वदेश पनि फर्कन चाहेको थिए । तर कम्पनीले पनि नदिए पछि जान सकिन । अबैधानीक भएर काम गर्न मन लाग्दैन । र अबैधानीक भएर घर पनि जान मनले नमानेको हुदा म बाध्य भएर याहि कम्पनीमा काम गर्न बाध्य छु ।
तपाई यत्तिका समय मलेसिया बसेर के कमाउनु भयो के गुमाउनु भयो ?
मलेसिया आएर श्रम के हो भन्ने बारे प्रत्यक्ष बुझ्न पाए । समयको पालना कसरी गर्ने भन्ने बारे पनि राम्रोसँग महसुस गर्न पाए । अर्काको अधिन र खटनमा काम गर्नुको नमज्जाको बारेमा थाहा पाएँ । मैले पाएको भनेको नै यस्तै हो । यत्तिसम्म खटिएर काम गर्दा पनि अहिलेसम्म आएको ऋण मात्र तिर्न सकेको छु । कमाउन केहि सकिएन । काम अनुसारको दाम नभएरै यस्तो भएको हो । मलेसियामा महिले मेरो उर्जा शक्ति मात्र नाश गरे । मेरो युवा जोश जागर मलेसियामै नष्ट भयो ।
अब जसो तसो आफ्नो ३ वर्षको कार्यकाल सकेर फर्कने छु । मलेसिया आएको १८ महिना भयो, बाँकी १८ महिना पछि आफ्नै देश फर्केर अर्काको देशमा कहिलै नजाने प्रतिबद्धता समेत गरेको छु ।
नेपाल फर्केर के गर्ने योजना छ ?
बरु जस्तो सुकै दुःख होस या समस्या होस, अब म आफ्नो देश छोडेर कहि जान्न । बिदेश के हो भन्ने कुरा महिले मलेसियाबाटै चिने । अब आफ्नै नेपाल फर्कर सानो तिनो ब्यवसायसँगै आफ्नै करेसाबारीमा कुटो कुटो कुदालो गरेर बस्छु ।